सुस्मिताको ४५ औ तिथिमा समाहल्न गा;र्‍हो भयो सुस्मिताकी आमालाई, रु;दै भनिन् यस्तो बि;लौना गरिन्..(हेर्नुहोस भिडियो) – Sandesh Munch
July 30, 2020 169
सुस्मिताको ४५ औ तिथिमा समाहल्न गार्‍हो भयो सुस्मिताकी आमालाई । रुदै माफि मागिन सुस्मिताकी आमाले । (हेर्नुहोस भिडियो)उनकी आमाले रुदै भनिन् मलाई माफ गर्दै छोरी मा तिम्रा ह;त्यारा हरुलाई कुनैपनि हालतमा छाड्नेछैन कानुनको दायरामा आयका छन् तिम्रो आत्मालाई शान्ति दिलाउने छु बाँकी भिडियो मा हेर्नुहोस्। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला !!!
काठमाडौं : कोभिड-१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिर रहेको सुनचाँदीको मुल्य स्थानीय बजारमा बिहीबार पनि बढेको छ । बुधबार प्रतितोला ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको पहेलो धातुमा ५सयले वृद्धि भएको छ ।
बिहीबार बजार खुल्ने वित्तिकै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार कायम भएको छ भने सोही परिमाणको तेजाबी सुनको मूल्य ९८ हजार ५६० निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबारको तुलनामा बिहीबार चाँदी २० रुपैयाँले घटेको छ । एक तोला सेतो धातुको मूल्य एक हजार २ सय २५ निर्धारण भएको छ ।
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न बन्दाबन्दी लागू गरिएयता जेठ २५ गते एक तोला सुनको मूल्य १० हजार ४सयले बढेर ८७ हजार पुगेको थियो । त्यसयता सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार सुन प्रतिऔंस १९६२.१५ डलर कायम भएको छ । गत आइतबार सोही परिमाणको सुन १९०१.६० मा कारोवार भएको थियो । रासस
Prevएकतोला सुनको मूल्य ९९ हजार पुग्यो
फेरि स्वाट्टै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
अनुहारको कालो पोतो हटाउने घरेलु उपाय यस्तो छ: हेर्नुहोस्